Android waxay heshaa astaan ​​cusub iyo summad cusub si loogu helo waddo loogu talagalay nooca cusub | Abuurista khadka tooska ah
Google waxay qaadatay waqti in ay ku baraan fiidiyoow Khadadka naqshadeynta cusub ee waxa noqon doona isbeddelka xiga ee Android. Fiidiyow muujinaya midabka midabka iyo qaar ka badan hagaha muhiimka ah si loo ogaado sida OS-kan uu ahaan doono sanadaha soo socda.
Waxay kaloo ogeysiiyaan inay sameyn doonaan saar lahjadda midabka si uu u muuqdo sida luqadda naqshadeynta ee barnaamijyada, xalalka iyo nidaamka hawlgalka, iyo sidoo kale muujinta midabada palette aad loo xushay.
Markii ugu dambaysay ee aad war cusub hesho in logo iyo design brand ahaa in 2014. Waa sannadkan oo la soo bandhigay muuqaal casri ah oo aan illoobin caruusadooda saaxiibtinimada ah ee android.
Naqshadeynta astaanta waxaa dhiirigaliyay robotka android, mid ka mid ah bulshada oo taasi astaan ​​u ahayd nidaamkan hawlgalka ee maanta ugu ugu ballaadhan meeraha. Waa robot-ka hadda boos gaar ah ku leh astaantaada.
Waxa uu ahaa wax ka beddelay astaanta cagaaran illaa madow sababtuna waxay tahay waxay ku cadahay aqrinta qaabkan. Markaan idhi midabka, inaan aragno robotka sidoo kale waxay ka dhigan tahay inay bilaabi doonaan inay baalal siiyaan u habeynta nidaamkooda hawlgalka nooca xiga ee Android 10; taas oo jidka ag fadhida, dib dambe loogu magacaabi doonin magaca macmacaan sida kuwii hore.
Fiidiyowga waxaan wadaagnaa Waxaad ku arki kartaa qeyb ka mid ah shaqada dib u qaabeynta astaanta iyo midabkaas midabka ah ee loo isticmaali doono sanadaha soo socda. Runtu waxay tahay inay aad isu dheellitiran tahay oo ay raacdo tilmaamaha luuqadda naqshadeynta ee uu arkay G weyn sannadihii la soo dhaafay.
Ha moogaan sida Google ugu qaabeeyey mawduuca mugdiga cusboonaysiinta cusub ee Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Tani waa muuqaalka cusub ee nooca Android
Slidesgo, waa qalab loogu talagalay xirfadleyda